Robert The Bruce, weScotland King uye yake huru nyaya kuverenga. | Zvazvino Zvinyorwa
Robert The Bruce, weScotland King uye yake huru nyaya kuverenga.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Biography, Mabhuku, Novela
Mifananidzo yeScotland mutambi Angus Macfadyen mumafirimu Braveheart (1995) uye Robert The Bruce (2019)
Pakati Chikumi 23 uye 24, 1314 kwakaitika hondo ye Bannockburn, umo mauto eScotland akatungamirirwa naMambo Robert I Bruce -Bruce weNhoroondo- akakunda maChirungu achiraira Edward II. Yakanga iri kukunda kukunda izvo zvakatungamira ku Kuzvimirira kweScotland Makore matatu gare gare.
Uye Robert The Bruce ndomumwe we madzimambo andinoda wenguva dzose. Izvi ndizvo Mabhuku matatu ekumuziva uye kuziva nezvenhoroondo yayo seinonakidza sezvo iri padhuze neyedu, nekuti mwoyo uye shamwari yake yepamwoyo Vakauya pano kuzorwa nemaMoor.
1 Robert The Bruce neni
2 Chibvumirano chaRobert The Bruce - John Barbour
3 Rima Mwoyo - Leon Arsenal
4 Dombo reKumo - Jesús Maeso de la Torre
Robert The Bruce neni
Ivo vashoma vane ruzivo munhoroondo uye vane huremu pakuverenga zvirokwazvo inogona kuziva uye kuyeuka Robert Bruce en Braveheart (gumi nemapfumbamwe nemapfumbamwe nemashanu). Muchokwadi, protagonist, William wallace, akafa muna 1305 uye haana kuenderana naRobert, uyo akagadzwa pachigaro muna 1306. Wallace akapindirana nevabereki vaRobert uye James Douglas, weNegro, shamwari yake yepamwoyo uye ruoko rwerudyi murume, uyo asina kuoneka mumuvhi nekuti iye ane rake chete kana mumwe munhu akatsunga kuzviita.
Baba vaRobert mumamuvhi ndizvo hunhu hunonakidza nechiso chakaremara. Iye ndiye anopa kuraira mwanakomana wake, akaratidzirwa aine vavariro dzakajeka kuna Wallace uye akabva aratidzwa zvakazara nemweya wake wekusunungura, kunyanya muchiitiko chekupedzisira chemhosva pahondo yeBannockburn. Asi iye ainyatsoshandisa rusununguko irworwo aive Robert.
Mhosva zhinji dzekufarira kwake chimiro chake Aive nekuturikira kwakamuita iye anozivikanwa zvishoma asi anotyisa mutambi weScotland akadanwa Angus MacFadyen, iyo isina kungochengeta iyo epic Gibson mukomana, asi akaba kanopfuura kamwe kupfura. Kubva ipapo ndakadya nhoroondo yavo.
Zvimwe zvezvikamu zvacho zvakakosha akatondikurudzira kare kare nyaya, kufanana neyake moyo kuomesa kuunzwa ne James douglas kuenda kuSpain, kwavakanorwa vachirwira pamwe namambo Alfonso XI weCastile muhondo ye Theba. Ndipo pakatangira zita remadunhurirwa rekuti "Braveheart." Uye mwedzi uno bhaisikopo idzva rinoburitswa rakanzi seizvi, Robert The Bruce, uko MacFadyen inotora hunhu hwaakaronga makore anoda kusvika 25 apfuura.
Asi kuziva zvakawanda uye zvakadzama heano maverengero matatu:
Chiito chaRobert The Bruce - John Barbour
Iyo yakasarudzika yeiyi Archdeacon weAberdeenchii mukati 1376 akarondedzera zvakaitwa naRobert. Iyi vhezheni yaive Dudziro naFernando Toda Iglesia, anobva kuYunivhesiti yeSalamanca. Inorondedzera zvese kutonga yaBruce kusvika parufu rwake, muna 1329, uye iya yeshamwari yake neshamwari, James Douglas.
Rima moyo - Leon Arsenal
Nemusoro wenyaya we Hondo yeScotland pamuganhu weGranada, anorondedzera iyo episode yekudonha kwa douglas muna Nyamavhuvhu 1330. Arsenal ndiye munyori we anopfuura gumi nemaviri enganonyorwa nedzidziso dzinodzidzisa. Mune zvinyorwa, akanyora mabasa e nhoroondo uye fantasy genre, uye akawana mibairo yakadai seGuta reZaragoza reNhoroondo dzeNhoroondo kana iyo Minotaur.
Dombo remagumo - Jesús Maeso de la Torre
Maeso de la Torre ari yakakura yenhoroondo yenhoroondo yekumusha. Akadzidza kudzidzisa mu Ubeda, kumusha kwake, uye gare gare akapedza kudzidza muFilosofi uye Nhoroondo muCádiz, kwaanogara. Ndiye zvakare munyori weunganidzwa wenhetembo Tsoka dzeDoto (1976), asi mukurumbira wayo unonyanya kukonzerwa nenhoroondo yenhoroondo ine mazita akadai se Al-Gazal, mufambi anobva kumativi maviri (2000), Bhokisi reChinese (2015) kana ichangoburwa, Misodzi yaJulius Caesar.
Musoro wacho unonongedzera kungano Scone Dombo, uko kwakagadzwa madzimambo eScotland. Robert Bruce akavimbisa kutora chikamu mukati crusade kuhwina rutsigiro rwe Avignon upapa kurusununguko rwenyika yako. Iyo rufu Yakanga yambomuyambuka kare, asi anga aine nguva yekupa James Douglas nebasa rekutora moyo wake wakasungwa kuNyika Tsvene kuti azadzise vimbiso yake. Ivo vakangosvika al-Andalus.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Robert The Bruce, weScotland King uye yake huru nyaya kuverenga.
Ndiwo here makumi maviri nemashanu epamusoro eBritish enganonyorwa enguva dzese?